Nampahafantarina ahy voalohany tamin'ny ReadyTalk taorian'ny nahalavoana tranokala niaraka tamin'i GoToWebinar. Nanana vahiny 3 aho tamin'ny seho avy any Denver, San Francisco, ary London. Maherin'ny 200 ny mpanatrika marary sy tsara fanahy niantona tao rehefa niatrika fanemorana feo sy sary be dia be izahay. Ka mila mitady mpamatsy manana fotodrafitrasa mety hanohanana ny filan'ny mpanatrika sy ny mpanatrika. Eto no tsara indrindra ReadyTalk. Traikefa amin'ny mpanolotra: Webinar ReadyTalk